Chelsea oo dib u bilawday wada xaajoodka ay ku dooneyso saxiixa Kounde & Afar xiddig oo awgii looga fasaxayo Stamford Bridge – Gool FM
(London) 23 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa markale Sevilla la bilawday wada xaajood ku aaddan saxiixa Jules Kounde iyadoo naadiga reer England ay waajib ku tahay inay iibiso xiddigo safkeeda ku jiro si ay u suuro geliso saxiixa difaacan.
Macallinka naadiga Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa xiiso badan u muujinaya saxiixa laacibka reer France si uu ugu xoojiyo safkiisa, waxaana taas baddelkeeda uu aqbalay inuu iridda u tilmaamo xiddigo ay ka mid yihiin Kurt Zouma iyo Davide Zappacosta.
Sidoo kale waxay wararka ka imaanaya dalka Ingiriiska sheegayaan in Tiemoue Bakayoko uu qayb wayn ka yahay yareynta safka Blues isagoo ku dhow inuu markale ku biiro AC Milan.
Si kastaba ha ahaatee, xiddigaha kale ee sababsanaya Kounde waxaa ku jira Malang Sarr iyo Ike Ugbo kuwaasoo laga deyrinayo mustaqbalkooda Galbeedka London.
Weli faah-faahin dheeraad ah lagama helin halka uu marayo wada xaajoodka u dhexeeya Chelsea iyo Sevilla iyo sida uu ku socdo, waxaase xiddiga reer France lagu qiimeeyaa 68 milyan oo gini.
Lyon oo Liverpool kala heshiisay iibka Shaqiri & Hal arrin oo hortaagan inuu laacibka si rasmi u dhammeystiro wareegistiisa